मनोरंजन – Page6– " कञ्चनजंगा News "
‘सेन्टी भाइरस’को गीत ‘फनफनी’ सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाली कथानक चलचित्र ‘सेन्टी भाइरस’को पहिलो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । आज काठमाडौंमा कार्यक्रम आयोजना गरेर ‘फनफनी’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो । कालीप्रसाद बास्कोटा र मेलिना राईको स्वर …
काठमाडौं । नेपाली कथानक चलचित्र ‘सेन्टी भाइरस’को पहिलो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । आज काठमाडौंमा कार्यक्रम आयोजना गरेर ‘फनफनी’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो ।
कालीप्रसाद बास्कोटा र मेलिना राईको स्वर रहेको गीतमा शब्द डीपी खनालको छ । संगीत शंकर थापाले भरेका छन् ।
गीतको भिडियोमा सिताराम कट्टेल, कुञ्जना घिमिरे, अञ्जली अधिकारी, दयाहाङ राई, विल्सनविक्रम राई, बुद्दि तामाङ लगायत कलाकार फिचर्ड छन् ।
फागुन ९ गतेका लागि रिलिज डेट लिएको चलचित्रलाई रामबाबु गुरुङले निर्देशन गरेका छन् ।
लाखौं ठ*गिए भन्दै चर्चित गायक सुनिल गिरी मिडियामा ! पल शाह खेलेको गीतमा उनलाई यसरी डुबा*ईयो (भिडियो हेर्नुस)
चर्चित गायक सुनिल गिरी लाखौं ठगिए भन्दै मिडियामा आएका छन् । शिशिर भण्डारीसँग कुरा गर्दै उनले आफु गीत चलेपनि लाखौं ठगिएको बताए । पछिल्लो समय सोल्टिनी भनी बोलाको गीतबाट झनै चर्चामा …
चर्चित गायक सुनिल गिरी लाखौं ठगिए भन्दै मिडियामा आएका छन् । शिशिर भण्डारीसँग कुरा गर्दै उनले आफु गीत चलेपनि लाखौं ठगिएको बताए । पछिल्लो समय सोल्टिनी भनी बोलाको गीतबाट झनै चर्चामा आएका सुनिलको पहिलो गीत नै बम्पर हिट रहेको थियो । को होला त्यो गीतले उनलाई नसोचेको सफलता दियो ।
उक्त गीतबाट उनलाई मात्रै हैन, मोडल पल शाह पनिलाई पनि निकै फाईदा भयो । पल शाहले पनि त्यसपछि अन्य चर्चित म्युजिक भिडियोहरुमा निरन्तर काम पाए । तर पल शाह खेलेको उक्त गीतबाटै सुनिल गिरी आफु लाखौं डुबेको बताउँछन् । गीत चल्दा पनि कसरी उनी ठगिए ? भिडियो हेर्नुस
राजु लामाले भने ‘द भ्वाइस अफ नेपालले’ मलाई यस्तो गरायो (भिडियो सहित )
राजु लामा कुनै जमानाका निकै लोकपृय गायक हुन् । उनी नेपाल बाहिर रहेका कारण उनी संगीत क्षेत्रवाट टाढीएका थिए । अहिले उनी नेपाल आएका छन् । भ्वाइस अफ नेपालमा रहेका उनी …
राजु लामा कुनै जमानाका निकै लोकपृय गायक हुन् । उनी नेपाल बाहिर रहेका कारण उनी संगीत क्षेत्रवाट टाढीएका थिए । अहिले उनी नेपाल आएका छन् । भ्वाइस अफ नेपालमा रहेका उनी अहिले फेरी लोकपृय भएका छन् । उनी आफै त्यो कुरा स्वीकार गर्छन । अहिलेको पछिल्लो जेनेरेशनले मलाई विर्सनु भएको थियो तर भ्वाइस अफ नेपालवाट मेरो लोकपृयता बढेको छ । मंगोलियन हार्ट ब्याण्डका निकै लोकपृय गायक उनी अमेरिकामा बस्दै आएका छन् । अब फेरी डिसेम्बरको अन्त्यमा अमेरिका जान लागेका उनी अब उतै नहराउने बाचा गर्छन । फेरी नेपाल आउने र आफ्ना फ्यानको मन नदुखाउने उनको भनाई छ ।
उनी अहिले अमेरिकावाट आएर एसिड आक्रमणमा परेकी बालिकालाई भेट्न अस्पताल पुगेका थिए । उनले ति बालिकाका अगाडी गीत गाएर हौसला जगाउने कोशिष गरे । भ्वाइस अफ नेपालवाट बाहिरिएका झुम्री र रिता राईको जीवनीले आफुलाई दुख लागेको बताए । उनले उनीहरुलाई अवसर दिएको बताएका छन् । उनले एलिजासंग पनि काम गर्दै गरेको बताउँछन् । नवलपरासीको प्रेक्षा लम्साल र दिलसदासंग पनि गीत गाउने तयारीमा रहेको र केही महिनामै गीत सुन्न पाउने बताए । उनले गीतको माध्यमवाट सबैलाई एक बनाउने र राम्रो कर्म गर्ने सबैलाई सकारात्मक भावना जाओस भन्ने आफ्नो इच्छा रहेको बताए ।
भ्वाइस अफ नेपालको सिजन २ मा जज बनेका उनको ब्यवहारका कारण अहिले दर्शक र श्रोताले निकै मन पराएका छन् । उनी आफु पहिला देखि नै सफ्ट र कम बोल्ने खालको स्वभाव भएको बताए । तर भ्वाइस अफ नेपालमा आएपछि झुम्री र रिता राईको जिवन कथाले मन छोएको र बोल्न पनि धेरै सिकेको बताए । उनीहरुको आँट र हिम्मतले आफ्नो जिवनमा पनि हौसला आएको बताए । आँखा देख्न नसक्ने झुम्रीमा त्यती धेरै आँट देखेर आफु सबैकुरामा परिपुर्ण भएकाले अझ धेरै गर्न सक्छु भन्ने हौसला आएको बताए । उनले उनीहरुका लागि केही गर्न सकेको भए हुन्थ्यो भन्ने मनमा आएको बताए ।
उनले भ्वाइस अफ नेपाल सिजन ३ मा पनि जज बन्ने सम्भावनाका बारेमा भने उनले अहिले नै केही भन्न नसकिने र भन्न पनि नमिल्ने बताए । उनले एक वर्ष भ्वाइसकै कन्ट्याकमा भएकाले त्यसका बारेमा केही भन्न नमिल्ने उनको भनाई छ । उनले भ्वाइसले सिजन ३ मा नराखे पनि कुनै दुख, गुनासो नरहेको बताए ।
The Cartoonz Crew बिस्तारै सबै फुट्नुको भित्री कारण अर्कै रहेछ ! सबिन कार्कीले मुख खोले (हेर्नुहोस भिडियो )
डान्स ग्रुप ‘कार्टुन क्रु’ स्थापना भएको १ दशक भइसक्यो । यो समुहको नाम, परिकल्पना र स्थापना सविन कार्की ‘विष्ट’ले गरेका थिए । यो समुहको लिडर थिए, सविन । समुहमा ७ जना …
डान्स ग्रुप ‘कार्टुन क्रु’ स्थापना भएको १ दशक भइसक्यो । यो समुहको नाम, परिकल्पना र स्थापना सविन कार्की ‘विष्ट’ले गरेका थिए । यो समुहको लिडर थिए, सविन । समुहमा ७ जना थिए । जसमा सविन, सरोज अधिकारी, आश्मा विश्वकर्मा, विकाश राई, राम गुरुङ, लाक्पा लामा र सुविन चौहान थिए ।
त्यो बेला कार्टुन क्रुले प्रायः कभर भिडियोहरु गर्दै आएको थियो । त्यसको निर्देशन सविनले गर्थे । भिडियो खिच्ने र सम्पादनको जिम्मा पनि उनी आफैले लिन्थे । करियोग्राफीमा उनलाई सरोजले सघाउँथे । कभर भिडियो निर्माण गर्दै आएको यो ग्रुप चाडै नै दर्शकको नजरमा बस्यो । सोही समयमा उनीहरुले तयार गरेको ‘फन्टास्टिक’ बोलको गीतको कभर भिडियो बम्पर हिट भयो । यसले उनीहरुको करिअरमा थप उचाई दियो । भिडियो हेर्नुस
चिकित्सकसंग बदला लिन वकिलद्धारा अस्पतालमा ह मला, तीन बिरामीको गयो ज्यान
एजेन्सी । पाकिस्तानको लाहोरमा चिकित्सकसँग बदला लिन वकिलहरुले अस्पतालमा गरेको ह मलामा तीन विरामीको ज्यान गएको छ । चिकित्सकसंग वदला लिन हजारौंको संख्यामा वकिलहरु अस्पतालमा प्रवेश गरि तो ड फो ड गरेका छन् ।
यो हम लामा केही बिरामीको ज्यान गएको हो । पाकिस्तानी पत्रिका डनका अनुसार पञ्जाबका स्वास्थ्य मन्त्री यास्मीन राशिले ज्यान जाने बिरामीको संख्या तीन भएको बताएका छन् । यस मामलामा ४० वकिललाई प्रहरीले प क्राउ गरेको छ । मानवअधिकार मन्त्री शिरानी माजरीले ट्वीट गरेर यो जानकारी दिएका हुन् ।
बुधबार लाहौरको पंजाब इन्स्टीच्युट अफ कार्डियोलोजीमा ठूलो संख्यामा वकिलले ह मला गरेका हुन् । वकिलका अनुसार आफूहरुले दुई हप्ताअघि एक वकिलमाथि डाक्टरले गरेको हम लाको बदला लिन यस्तो गरेका हुन् ।
दुर्लभ चरा राजधनेश र राज लहाचेको संरक्षणमा नगरपालिका
भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेवस्थित जैविक मार्ग क्षेत्रमा पर्ने बन्दा ताल आसपासकै क्षेत्रमा विश्वकै दुर्लभ चरा राजधनेश र राज लाहाचे फेला परेपछि संरक्षणको प्रयासको थालनी गरिएको छ । बन्दा ताल क्षेत्रको जैविक विविधता जोगाउन नगरपालिकाले चासो देखाउन थालेको हो ।
बन्दा ताल क्षेत्रमा दुर्लभ प्रजातिका चरा पाइन थालेपछि संरक्षणका लागि योजनाबद्धरुपमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले बताए । “जैविक मार्ग आसपासका पुरिँदै गएका ताललाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने कार्य गरिएको छ”, उनले बताए, “तालको सरसफाइसँग पुर्नभरणको कार्य गरी ताललाई पुरानो अवस्थामा फर्काएका छौँ ।”
दुर्लभ तथा अन्य प्रजातिका चरा र जीवजन्तु संरक्षणका लागिसमेत संरक्षणका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन इच्छुक रहेको उनले बताए । नेपाल पक्षी संरक्षण सङ्घ र नेपाल ग्रामीण विकास केन्द्रले गरेको पक्षी सर्वेक्षणका क्रममा जैविक मार्ग क्षेत्रमा लोपोन्मुख पक्षीसहित ८८ प्रजातिका चरा देखिएका थिए ।
अङ्गे्रजीमा गे्ररट हर्न बिल भनिने हेलमेट जस्तो रङ्गिन शिर भएको राजधनेश धेरै वर्षपछि पहिलोपटक देखापरेको नेपाल पक्षी संरक्षण सङ्घका जीव विज्ञ हिरुलाल डङ्गौराले बताए । उनका अनुसार प्रायजसो सानो सानो झुण्डमा देखिने यो पक्षी हेर्दा निकै नै सुन्दर र आकर्षक हुन्छ । यसलाई स्थानीय भाषामा होमराई पनि भनिन्छ जसको अर्थ जङ्गलको राजा भन्ने हुन्छ ।
हाल नेपालमा राजधनेशको सङ्ख्या १५० भन्दा कम रहेको अनुमान गरिएको छ । नेपालको वन्यजन्तु संरक्षण ऐनद्वारा संरक्षित नौ पक्षीमध्ये राजधनेश पनि एक हो । राजधनेशलाई साइटिस अनुसूची–१ मा सूचीकृत गरिएको छ । गुँड निर्माण र ओथारो प्रक्रियामा रोचक र अनौठो स्वभाव देखाउने राजधनेशले ठूला र बुढा रुखका टोड्कामा गुँड बनाई वर्षायाममा प्रजनन गर्छ ।
राजधनेशको भालेले पोथीलाई अण्डा पारेपछि बच्चा नहुर्कञ्जेलसम्म टोड्कामा रहेको गुँडमा नै थुनेर राख्छ । धनेश दम्पतीले हिलो र पोथीको विष्टाको सहयोगमा टोड्काको मुख पूरै टाल्छन् र त्यसमा बनाइएको सानो प्वालबाट पोथीले हावा तथा आहारा लिने गर्छ । ओथारो अवधिभर पोथीलाई र तत्पश्चात् बच्चालाई पनि भालेले नियमितरुपमा बाहिरबाट आहारा खुवाउने गर्छ ।
“सम्भवत यही स्वभावका कारणले होला राजधनेशलाई पत्नीवर्ता पक्षी पनि भनिन्छ”, डगौराले भने, “प्रकृतिमा भएका कतिपय हानिकारक किराफट्याङ्ग्रा, मुसा तथा छिपकली खाई राजधनेशले पर्यावरणीय सन्तुलन तथा खाद्यचक्र गतिशील राख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ, विभिन्न बिरुवा तथा फलफूलको बीउ विस्तार र वितरणमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउने हुँदा यसलाई जङ्गलको किसान पनि भनिन्छ ।” खास किसिमको बासस्थानमा मात्र पाइने यो चरा त्यस्ता क्षेत्रको वातावरणीय सूचक पनि मानिन्छ ।
राज लाहाचे पनि लाहचेमध्येको सबैभन्दा ठूलो हो र यसलाई स्वस्थ बनको सूचकका रुपमा लिइन्छ । समुन्द्र सतहबाट ३०० मिटरको उचाइसम्म पाइने राज लाहाचेको सङ्ख्या नेपालमा २५० भन्दा कम रहेको अनुमान गरिएको छ । पछिल्ला दशकमा वन विनाश र अतिक्रमणले ठूला तथा पुराना रुखको अभावमा राजधनेश र राज लाहाचेको सङ्ख्या दिनानुदिन घटिरहेको बताइएको छ ।
पछिल्ला दशकमा खासगरी मानवीय क्रियाकलापको परिणामस्वरुप बासस्थान सङ्कुचन तथा विनाश, वन फँडानी र अतिक्रमण, वन डढेलो, घाँसे मैदानको नाश, अवैध चरा सिकार तथा व्यापार, रासायनिक मल तथा विषादीको बढ्दो प्रयोग, बद्लिँदो तापमान र मौसम परिवर्तन जस्ता कारणले थुप्रै प्रजातिका चराले सङ्कट झेलिरहेका छन् ।
हालसम्म नेपालबाट आठ प्रजातिका चरा लोप भइसकेका छन् भने विश्वमै दुर्लभ मानिएका ४४ प्रजाति र १६८ प्रजातिका चरा राष्ट्रियरुपमा सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेका बताइउको छ । नेपालमा बासस्थान विनाश नै चराका लागि मुख्य खतरा हो । त्यसका कारण ८६ प्रतिशत चरा सङ्कटापन्न अवस्थामा पुगेका डगौराले बताए ।
केकी र आँचलको सिउँदोमा सिन्दुर
नायिकाद्धय केकी अधिकारी र आँचल शर्माको बोन्डिङ गज्जबको देखिएको छ । यी दुई नायिका हाल चलचित्र ‘झिंगे दाउ’को छायांकनमा व्यस्त छन् । चलचित्रमा यी दुइलाई दर्शकले केही फरक अवतारमा देख्न पाउनेछन् …
नायिकाद्धय केकी अधिकारी र आँचल शर्माको बोन्डिङ गज्जबको देखिएको छ । यी दुई नायिका हाल चलचित्र ‘झिंगे दाउ’को छायांकनमा व्यस्त छन् । चलचित्रमा यी दुइलाई दर्शकले केही फरक अवतारमा देख्न पाउनेछन् ।
केकीले यस्तो भूमिका यसअघि पनि केही चलचित्रमा गरेकी थिइन् भने आँचलका लागि यो फ्रेस भूमिका हो । यी दुइले आफ्नो सामाजिक संजालमा एक अर्काको चर्चा गर्न थालेका छन् ।
यसैविच, आँचलले सार्वजनिक गरेको एक तस्वीरमा यी दुबैको सिउँदोमा सिन्दुर देख्न सकिन्छ । आँचल त यसैबर्ष बिहे गर्ने तयारीमा पनि छिन् तर केकीको भने बिहे पक्का भएको छैन ।
चलचित्रको पर्दामा बेहुली बन्दाको अनुभव गर्न पाउँदा यी दुई नायिका खुशी देखिएका छन् । केकी र आँचलले यस्तो खालको भूमिका गर्न पाउँदा आफूहरु उत्साहित रहेको बताएका छन् । ज्ञानेन्द्र देउजाको निर्देशनमा तयार भैरहेको यो चलचित्रमा मुकुन भुषाल पनि मुख्य भूमिकामा छन् ।
यस्तो बन्यो अल्लु अर्जुनको ‘अला भईकुन्ठपुरमलु’को टिजर (हेर्नुहोस टीजर सहित)
साउथका सुपरस्टार अल्लु अर्जुन आफ्नो नयाँ फिल्म ‘अला भईकुन्ठपुरमलु’ लाई लिएर चर्चामा छन् । यो फिल्मको टिजर पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । फिल्मलाई त्रिविक्रम ने निर्देशन गरेका हुन् । फिल्मको स्क्रिनप्ले …
साउथका सुपरस्टार अल्लु अर्जुन आफ्नो नयाँ फिल्म ‘अला भईकुन्ठपुरमलु’ लाई लिएर चर्चामा छन् । यो फिल्मको टिजर पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । फिल्मलाई त्रिविक्रम ने निर्देशन गरेका हुन् । फिल्मको स्क्रिनप्ले पजि निर्देशक क्रिविक्रम आफैले लेखेका हुन् ।
यस कमर्सियल फिल्ममा अल्लु अर्जुनका साथमा अभिनेत्री पूजा हेग्डेलाई पनि प्रस्तुत गरिएको छ । यो एक मसला फिल्म हो । फिल्मको सार्वजनिक टिजरमा अभिनेता अल्लु अर्जुनलाई एकशन अवतारमा देख्न सकिन्छ ।
अभिनेत्री पूजा पनि निकै स्टाइलिश अवतारमा प्रस्तुत गरिएको छ । यो फिल्म १२ जनवरी २०२०बाट दर्शकमाझ प्रस्तुत गरिनेछ ।
अभिनेत्री पूजा हेग्डे यस अगाडि महर्षि फिल्ममा देखिएकी थिइन् । सो फिल्ममा उनी अर्का अभिनेता महेश बाबुको अपोजिटमा प्रस्तुत भएकी थिइन् ।
उक्त फिल्मले बक्स अफिसमा उत्कृष्ट कलेक्शन गरेको थियो । यसका साथै उनी अक्षय कुमारको हाउसफुल ४ मा पनि देखिएकी थिइन् । सो फिल्म पनि सुपर हिट साबित भएको थियो ।
Tik Tok बाट भाईरल भएकी पुर्वकी उषा उप्रेती मिडियामा ! छाडा हेर्नै नसकिने यस्तो कमेन्ट आएपछि जँगिईन (भिडियो हेर्नुहोस्)
लामो समयदेखि अष्ट्रेलियामा रहेका गायक सन्जीव खरेल र निकिता थापाको स्वरमा तयार भएको गीत प्रेम कहानीको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। टिकटकमा करिब ४ लाख फलोअर्स पाउन सफल सुन्दरी मोडल उषा …
लामो समयदेखि अष्ट्रेलियामा रहेका गायक सन्जीव खरेल र निकिता थापाको स्वरमा तयार भएको गीत प्रेम कहानीको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। टिकटकमा करिब ४ लाख फलोअर्स पाउन सफल सुन्दरी मोडल उषा उप्रेती र सागर थापाको अभिनय रहेको छ। गीतको निर्देशन प्रविन भट्टले गरेका हुन्।
अनिल के मानन्धर र करन चैसरको छायांकन रहेको भिडियोमा कोरियोग्राफी प्रमोद भण्डारीको रहेको छ। गायक स्वयम्को शब्द रहेको गीतको संगीत संयोजन उदयराज पौडेलले गरेका हुन्।
भिडियो अहिले बजारमा चलिरहका भन्दा भिन्न शैलीमा तयार गरिएको छ। यसैबिच गीतकी मोडल उषा उप्रेतीले शिशिर भण्डारीको नयाँ नयाँ न्युज नेपाल मार्फत् आफ्नो कुराहरु राखेकी छिन् । उनले टिक टकमा छाडा कमेन्ट गर्नेहरुलाई ठाडो चेतावनी दिईन् । हेर्नुहोस, टिकटकबाट भाईरल भएकी झापाकी उषाले के भनिन् । भिडियो हेर्नुस
बलिउड नायक शाहिद कपुरको फिल्म कबीर सिंहलाई दर्शकले निकै रुचाएका छन् । फिल्मले बक्स अफिसमा पनि राम्रो कमाई गरेको छ । दर्शकले फिल्ममा शाहिद कपुरको अभिनयको अत्यधिक तारिफसमेत गरेका छन् । …
दिपिका आफ्नै अनुहार देखेर किन तर्सिइन् ?
मुम्बई । अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले फिल्म छपाकमा आफ्नो अनुहार हेरेर आफैं तर्सिएको बताएकी छन् । सुटिङको क्रममा एसिडले जलेको स्वरूपको आफ्नो तस्बिर हेरेर बाँकी कलाकार र प्राविधिक पनि तर्सिएको अनुभव उनले …
मुम्बई । अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले फिल्म छपाकमा आफ्नो अनुहार हेरेर आफैं तर्सिएको बताएकी छन् । सुटिङको क्रममा एसिडले जलेको स्वरूपको आफ्नो तस्बिर हेरेर बाँकी कलाकार र प्राविधिक पनि तर्सिएको अनुभव उनले सुनाएकी छन् ।
यो फिल्मको मंगलबार ट्रेलर रिलिज गरिएको छ । फिल्ममा एसिडले मुहार र शरीरको केही अंग जलेर कुरूप भएकी एक युवतीको भूमिका अभिनेत्री दीपिकाले निर्वाह गरेकी छन् । मेघना गुलजारले निर्देशन गरेको यो फिल्म वास्तविक कथामा आधारित रहेको बताइएको छ । भारतकी लक्ष्मी अग्रवालले एसिड पीडित भएपछि न्यायका लागि लामो समयसम्म संघर्ष गर्नुपरेको थियो । उनको संघर्षको कथा पढेपछि निर्देशक मेघनालाई त्यो कथालाई फिल्ममा ढाल्ने निधो गरेकी थिइन् । फिल्म छपाकमा लक्ष्मीको भूमिका दीपिकाले निर्वाह गरेकी छन् ।
एसिड पीडित एक युवतीले न्याय पाउनका लागि सबै तहका अदालतमा वर्षांै धाउनुपरेको र अन्त्यमा आफूजस्तै अरू एसिड पीडित युवतीहरूको लागि उनले संघर्ष गर्नुपरेको कथा फिल्मको ट्रेलरमार्फत प्रस्तुत गरिएको छ । यसको ट्रेलरलाई अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक सेयर गरिएको छ ।
फिल्मको टिजर निकै डरलाग्दो छ । फिल्ममा एसिडले जलेको अभिनेत्री दीपिकाको महुर हेर्दा जो कोही पनि तर्सन्छन् । आफूलाई यस रूपमा ढाल्न मेकअप आर्टिस्टले घन्टौं मेकअप गर्नुपरेको अनुभव अभिनेत्री दीपिकाले सुनाएकी छन् ।
ट्रेलरअनुसार सुरुमा जल्दाको उनको मुहारको स्वरूप जति भयानक र देखाइएको छ । पछि घाउ ठीकै हुँदै गएपछि मुहारको स्वरूपको भयानक पक्ष केही कम हुँदै गएको छ । फिल्ममा दीपिकालाई न्यायको लागि अभिनेता विक्रान्त मेसीले साथ दिएको ट्रेलरमा देखाइएको छ । यो फिल्मलाई एक महिनापछि रिलिज गरिँदै छ ।राजधानीबाट
एजेन्सी । अन्तत अरणबीर कपुर र आलिया भट्टको विवाह हुने निश्चित भएको छ । उनीहरुका अभिभावक सहमत भएपछि विवाह पक्का भएको हो । लामो समय देखि प्रेम सम्बन्धमा रहेको उनीहरुको विवाह …
एजेन्सी । अन्तत अरणबीर कपुर र आलिया भट्टको विवाह हुने निश्चित भएको छ । उनीहरुका अभिभावक सहमत भएपछि विवाह पक्का भएको हो । लामो समय देखि प्रेम सम्बन्धमा रहेको उनीहरुको विवाह अभिभावले सहमति नदिँदा ढिलाई भएको थियो । उनीहरुको विवाह सन २०२० मा हुने पक्का भएको हो ।
उनीहरुका विवाहका लागि दुवै परिवारका सदस्य राजी भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेको छ । उनीहरुको विवाहको सन्दर्भमा ऋषि कपुर र महेश भट्टविच कुराकानी भए पछि विवाहका लागि सहमत भएका हुन् । भट्ट परिवारका सदस्यका अनुसार आलियाले विवाहका लागि विदेश नजाने योजना बनाएकी छिन् । आलियालाई काश्मिर निकै मन पर्छ भने उनले आफ्नो विवाह पनि काश्मिरमा मनाउनै योजना बनाएकी छिन् ।
मेघना गुलजारको फिल्म ‘राजी’को सुटिङको क्रममा आलिय सन २०१७ मा काश्मिर पुगेकी थिइन् । सोही समयदेखी आलिया काश्मिरको सौन्दर्यवाट मोहित बनेकी थिइन् । आलियाको योजनामा रणबीर पनि सहमत भैसकेका छन् ।
अलिया भट्ट र रणवीर कपूर अहिले प्रेममा चुर्लुम्म डुबेका थिए । उनीहरूले एकअर्काप्रतिको प्रेम अनेकौं अवसरमा प्रकट गरिसकेका थिए । पुरस्कार समारोह, विभिन्न कार्यक्रम वा बिहेहरूमा उनीहरू क्युट पारामा हातमा हात राखेर हिँडिरहेका भेटिन्थे । उनीहरू लजाएको र मुस्काएको अवस्था देखेका भारतिय मिडियाले उनीहरुको सम्बन्धको बारेमा धेरै अघि देखि खुलाएका थिए ।
आलिया भट्टको पछिल्लो फिल्म कलंक फ्लप भएपछि उनले असफलतालाई स्वीकार गरिन् र अर्को फिल्म ब्रह्मास्त्रको कुरा झिकिन् । ब्रह्मास्त्रमा उनी रणवीर कपूरसँग देखिइन् । पिंकभिल्लासँगको अन्तर्वार्तामा आलियाले रणवीरसँगको सहकार्यका बारेमा खुलेर कुरा गरेकी थिइन् ।
उनले भनिन्, ‘ऊ र म पहिलोपटक एउटै फिल्ममा काम गरिरहेका छौं र म यसमा वास्तवमै खुशी छु । कुनै बेलामा म सोच्थें – उससित कहिले काम गर्न पाउँछु होला भनेर ।’म र रणवीर सँगै आउँदा एक किसिमको जादू छायो । मैले ब्रह्मास्त्र चल्ने आशामा यो कुरा भनेकी हुँ र घमण्ड गरेको हैन ।’
‘रणवीरले मलाई भिन्न अनुभव गराउँछन् । म आफ्नो निजी जीवनका बारेमा कुरा गर्न त मन पराउँदिनँ तर उससँग बस्दा मलाई निकै सहज अनुभव हुन्छ । ऊ गजबको मान्छे हो र म उससँग दिनदिनै नयाँ नयाँ कुरा सिकिरहेकी हुन्छु । म अहिले व्यावसायिक र निजी दुवै क्षेत्रमा आनन्दको अनुभव गरिरहेको छु ।’